ချောင်းဆိုးအမြန်ဆုံးသက်သာစေဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ… ? by popolay.com
17 Mar 2020 4,578 Views
အအေးမိ၊ ရင်ကျပ်၊ အာခြောက်၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အက်ဆစ်ရည်လျှံတက်ရောဂါ၊ ဓါတ်မတည့်ရောဂါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ တီဘီရောဂါ၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ​ဆေးဝါးတချို့ရဲ့ဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု အစရှိသည်တို့ဟာ ချောင်းဆိုးစေတဲ့အကြောင်းအရင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးပုံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် အဲ့တာတွေကတော့ ရိုးရိုးချောင်းဆိုးတာ၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ၊ ချွဲသလိပ်ကပ်ချောင်းဆိုးတာ၊ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးတာ အစရှိတာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲ ဆိုးဆိုး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ တစ်ခါတလေမှာ ချောင်းတွေတအားဆိုးလွန်းလို့ မျက်နှာတွေ နီမြန်းလာတာ၊ ဗိုက်ကြောတွေနာလာတာမျိုးတွေ​ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လူတွေကြားထဲမှာ ဆိုးတာမျိုးဆိုတော်တော် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပါ။ ပိုဆိုးတာကဘတ်စ်ကားထဲမှာဆိုးရင် ဘေးလူတွေကို အားနာရတာကလည်းတစ်ကြောင်း၊ ဘေးလူတွေ ရဲ့အကြည့်ခံရတာကလည်းတစ်ကြောင်းနဲ့ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဒီခံစားချက်မျိုးဟာ ဖြစ်ဖူးတဲ့လူပဲ ကောင်းကောင်း နားလည်မှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချောင်းဆိုးအမြန်သက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများကို ပြောပြပေးသွားမှာမို့ တကယ်ကို အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ်။
တစ်နေ့တာ သောက်နေတဲ့ရေပမာဏကို ပုံမှန်ထက်ပိုသောက်ပေးပါ၊ လည်ချောင်းမှာကပ်နေတဲ့ ချွဲသလိပ်များကို ပျော်စေပါတယ်။ လည်ချောင်းကိုစိုစွတ်စေတဲ့အတွက် အာခြောက်ပြီးချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းယားယံခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။
ရေများများသောက်တာထက် ရေနွေးသောက်တာက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ရေနွေးဟာ ရေအေးထက် ချွဲသလိပ်များပိုပျော်စေပြီး လည်ချောင်းကိုလည်း ပိုမိုစိုစွတ်စေပါတယ်။ ပျားရည်၊ သံပုရာရည်တို့နှင့် ရောသောက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနွေးပြီး၊ အပြင်ပိုင်းနွေးနွေးထွေးထွေးနေပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာဟာ အအေးမိပြီးနှာရည်ယိုတဲ့လူတွေ၊ ဓါတ်မတည့်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုတယ်။
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ငုံထားပေးပါ၊ လည်ချောင်းယားယံမှုတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။
ညဘက် လေအေးပေးစက်နှင့်အိပ်တတ်တဲ့သူများ (အထူးသဖြင့် ချောင်းဆိုးနေတဲ့သူ) အနေနဲ့ညဘက်ဆို အခန်းထဲလေထုက အေးပြီးခြောက်သွေ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ လည်ချောင်းကိုပိုမိုယားယံစေပြီး ချောင်းပိုဆိုးခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အခန်းထဲမှာလေထုစိုထိုင်းဆပေးစက်ကို အသုံးပြုပေးပါက ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် : ရေငွေ့ပေးစက်ကနေ ရေငွေ့တွေထွက်လာပြီး အခန်းထဲလေထုကို စိုထိုင်းဆထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။(ဆေးရုံအချို့မှာ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး) ကိုယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်သလို ရနံ့ထပ်ဖြည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ ကာမိုမိုင်းတို့၊ လာဗင်ဒါတို့လိုမျိုး အိပ်ပျော်ကောင်းစေတဲ့ ရနံ့မွှေးများရွေးပေးပါက နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူများ ချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပေးပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ လည်ချောင်းကို ပိုမိုယားယံစေပြီး ချွဲသလိပ်များကိုလည်းပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးလိပ်ကို လုံးဝဖြတ်လိုက်တာပါ။ အကယ်၍ သင်က ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့များရှိရာကနေ ဝေးဝေးသာရှောင်နေလိုက်ပါ။
7. ရေမွှေးစွတ်တာ စပရေးဖျန်းတာတွေ ရပ်ပါ
ရေမွေး၊ စပရေး၊ အခန်းဖျန်းစပရေး တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓါတုဆေးတချို့ဟာ နှာခေါင်းများယားယံစေခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်းနဲ့ ချွဲသလိပ်ကပ်ခြင်းတို့ ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
8. မီးခိုးငွေ့၊ ဖုန်မှုန့် နဲ့အမှုန်အမွှားများကိုရှောင်ပါ
ထမင်း၊ ဟင်း ချက်တာကနေထွက်တဲ့မီးခိုးများနဲ့ ကားအိတ်ဇောကနေထွက်တဲ့မီးခိုးငွေ့များဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုလေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကလည်း ချောင်းဆိုးတာကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ Mask တပ်ထားပေးပါ။
ချောင်းဆိုးမြန်မြန်နဲ့မပျောက်နိုင်တာ၊ ပိုဆိုးသွားတာတွေက အိပ်စက်အနားယူချိန် ကောင်းကောင်းမရှိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝအိပ်စက်အနားယူပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အထက်ပါအချက်များကို သေချာလိုက်နာသော်လည်း သက်သာမသွားဘဲ အခြေအနေထပ်ဆိုးလာတာမျိုး (သို့) ၁ ပါတ် ၂ ပါတ်အထိကြာသွားခဲ့တာမျိုးဆိုရင် လျစ်လျူမရှုဘဲ နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်သွားရောက်ပြသပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။